Ilontsera – Lalàn’ny fifandraisana : « Manampatra fahefana sy miziriziry ny mpitondra… » | NewsMada
Ilontsera – Lalàn’ny fifandraisana : « Manampatra fahefana sy miziriziry ny mpitondra… »
Namatrapatratra ny mpitondra mihitsy ny Ilontsera, araka ny fanambarany afakomaly. « Manampatra ny fahefany, miziriziry amin’ny heviny, manao teny midina sy teny baiko, ka mampitombo ny fiahiahiana sy ny tahotry ny olom-pirenena izao fitondrana izao. Mpitondra fanjakana tsy mba misokatra amin’ny fifanakalozan-kevitra, tsy fandraisana fanapahan-kevitra miaraka ary tsy fiarahana manorina: tsy manao teny iarahana sy tsy manao teny ierana », hoy izy ireo. Mahatsapa koa ny Ilontsera fa hanjakan’ny teritery, fa tsy naorina tao anatin’ny rafi-pisainan-tserasera, manome lanja ny fiarahamonina, io lalàn’ny fifandraisana io ka mahatonga ny fanabadoana ny mpanao gazety sy ny mponina.
Tsipahin’izy ireo koa anefa ny fanilikilihana tamin’ny fihaonana teo amin’ny filoham-pirenena sy ny mpanao gazety, farany teo. « Manohitra ny fanaovana an-jorom-bala ireo fiarahamonim-pirenena tao anatin’ny fihaonana sy ny fanapahan-kevitra izahay kanefa izy ireo, efa nandray anjara tamin’ny famolavolana io lalàna io. Midika ho fanilihana azy ireo ao anatin’ny fandinihana sy ny fandrindrana ny fiainam-pirenena sy ny tontolon’ny serasera izany », hoy ihany ny fanambarana.
Fisaraham-bazan’ny mpanao gazety
Efa maneho izany rahateo ny tsy fampidirana azy ireo ao anatin’ilay Rafitra hanara-maso ny fifandraisana sy ny serasera (ANRCM), araka ny fanambarana. « Zary toa lasa fitaovam-pamoretana sy fampitahorana eo am-pelatanan’ireo tompon’andraikitra ara-politika io rafitra io », hoy ihany ny Ivom-pandalinana ny tontolon’ny serasera marolafika na ny Ilontsera ity. Tahaka izany koa ny mpanao gazety, araka ny fahitan’izy ireo azy. Tratry ny fampisaraham-bazana.
Nohitsin’ny Ilontsera fa tsy mijery lavitra ny mpitondra, momba ity lalàn’ny serasera ity ka nilazan’izy ireo fa lasa ady eo amin’ny mpitondra sy ny mpanao gazety ary ny rafi-pitantanana ihany, ny fiheveran’ny fanjakana izao fitakiana mikasika ny lalàna mifehy ny serasera izao. « Tsy misy fikatsahana ny fahaleovantena sy ny fahafahana maneho hevitra ary ny fahalalahana mahazo vaovao, zo fototra maneran-tany, amin’ny maha olom-pirenana ary ao anatin’ny rafitra fokonolona », hoy izy ireo.
Miantso fifampidinihana indray ny Ilontsera
Manoloana izany, miantso ny mpisehatra rehetra, miaraka amin’ny fiarahamonim-pirenena, hiverina hifampidinika, mba hisian’ny mangarahara ao anatin’ny famahana izao olana izao ny Ilontsera. Miantso koa ireo mpisehatry ny serasera rehetra hiray hina hitadiavana ny vahaolana, ho fanajana ny demokrasia sy ny zon’olom-pirenena. Manentana ireo fiarahamonim-pirenena hanampy ny mponina hahazo sy hahafantatra ireo andininy ao anatin’io lalàna io sy ireo lokanady, indrindra amin’ny alalan’ny teniny sy fiteniny, koa izy ireo. « Manentana ireo mpisehatry ny serasera hanohy ny asan’izy ireo amin’ny fomba matihanina, ao anatin’ny fanajana ny andraikitra tanan’izy ireo eo anivon’ny fiarahamonina.
Manentana ny olom-pirenena hamantatra sy hitaky ny zony ary handray ny andraikiny, hiaina ao anaty rivotry ny fahafahana », hoy ihany ny Ilontsera.